Yenza Ngokwezifiso ingemuva - Izeluleko - I-T bino RELAY
Accueil » AMACEBISO »Yenza Ngokwezifiso Isizinda - Izeluleko
Yenza Ngokwezifiso Isizinda - Izeluleko
Ufuna ukwenza ngokwezifiso isithombe sangemuva se-imeyili yakho ye-WhatsApp? Nakhu ukuthi ungafika kanjani lapho ngokuchofoza okumbalwa. Futhi ungakhetha ngisho nesithombe esingemuva esingafani engxoxweni ngayinye. Landela umhlahlandlela.
Uma usebenzisa WhatsApp nsuku zonke ukushintshanisa imiyalezo nabathandekayo bakho, le thiphu yenzelwe wena: ngokuchofoza izinkinobho ezimbalwa, uzokwazi ukufaka esikhundleni samaphephadonga ezenzakalelayo wohlelo lokusebenza. Futhi ukuthi kungokusiza ukuhlela kangcono izingxoxo zakho noma ukumane ukhuphule induduzo yokusebenzisa, futhi ungenza ngezifiso isithombe sangemuva sengxoxo ngayinye. Nakhu kanjani.
Yenza ngokwezifiso isendlalelo se-WhatsApp esizenzakalelayo
Vula uhlelo lwakho lokusebenza lwe-WhatsApp
Kubha ephezulu yemenyu, chofoza ku amaphuzu amathathu aqondile
Ekhasini lezilungiselelo, chofoza engxenyeni leyo Izingxoxo
Bese uchofoza isigaba Wallpaper ukuletha wonke amathuba okwenza ngokwezifiso isizinda sakho se-WhatsApp.
Chofoza inkinobho gallery ukusebenzisa isithombe njengephepha lodonga sezingxoxo zakho ze-WhatsApp. Uhlelo lokusebenza likuvumela ukuthi ukhethe isithombe osifunayo, futhi uma usukhethile, ungawenza ngokwezifiso ukubukeka kwawo.
KuUkubuka kuqala isithombe sangemuva, ungasondeza noma uphume esithombeni futhi ungahudula isikhundla sangemuva lakho ngokuqondile noma mpo. Uma usuqedile ukulungisa izilungiselelo zakho, chofoza ichaze ezansi kwesikrini.
Uma ungafuni ukusebenzisa isithombe sakho njengephepha lodonga, i-WhatsApp ikunikeza amanye amathuba ambalwa:
Uma uchofoza inkinobho eluhlaza okwesibhakabhaka umbala, ungakhetha isendlalelo esicacile, phakathi kwemibala engamashumi amathathu ehlongozwayo
Chofoza inkinobho eluhlaza Umtapo Wezezikhwama Ukukhetha enye yezimali ezinikezwe yiWhatsApp (uhlelo luzokucela imvume yokulanda iphakethe)
Uma uchofoza inkinobho ebomvu Akukho sangemuva, I-WhatsApp izomane isebenzise ingemuva lokukhanya okusobala okusobala kuzo zonke izingxoxo zakho
Ukubuyisa amaphephadonga angawenzeki wohlelo lokusebenza, mane uchofoze inkinobho eluhlaza Ngokwehluleka.
Faka isithombe sangemuva kungxoxo ye-WhatsApp
Nge-WhastApp, ungakhetha isithombe esingemuva esingafani engxoxweni yakho ngayinye. Ngemizuzwana embalwa, ungashintsha isithombe sangemuva kwengxoxo yakho:
Kumenyu Disc., vula ingxoxo ofuna ukuyenza ngokwezifiso
Qhafaza amaphuzu amathathu aqondile phezulu kwesikrini
Chofoza Wallpaper kumenyu evulayo
Njengangaphambili, i-WhatsApp inikeza amathuba amaningi okwenza ngezifiso isithombe sangemuva sengxoxo ekhethiwe.
Chofoza inkinobho gallery Ukukhetha isithombe osifunayo njengephepha lodonga lengxoxo
Chofoza inkinobho eluhlaza okwesibhakabhaka umbala Ukukhetha isizinda esingaqondile
Chofoza inkinobho eluhlaza Umtapo Wezezikhwama Ukukhetha enye yezimali ezinikezwe kwiphakethe le-WhatsApp
Chofoza inkinobho ebomvu Akukho sangemuva ukusebenzisa isizinda sokukhanya okusobala okumpunga kwingxoxo yakho
Chofoza inkinobho eluhlaza Ngokwehluleka ukubuyisela amaphephadonga ezenzakalelayo zohlelo lokusebenza.
Futhi manje, kumasekhondi ambalwa, ungeze ukuthinta komuntu siqu ku-imeyili yakho oyithandayo.
Usosayensi odumile wembula imbangela engenzeka ye-leukemia ezinganeni - ISANTE PLUS MAG
Khiya - Izeluleko